Dawlada Maraykanka oo faah faahin ka bixisay nooca ay yihiin xayiraado lagu kordhiyey Soomaaliya (Dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 13, 2013 10:09 g 0
USA, April 14, Dhowaan ayay ahayd markii Madaxweynaha dalka Maraykanka Barrack Obama uu ?cusboonaysiyey xayiraado uu horay ugu soo rogay soomaaliya.
Go’aankaasi ayaa sababay jaah wareer ku aadan waxa ay dhab ahaan yihiin xayiraadaha lagu kordhiyey Soomaaliya, iyadoo dadka qaarba si u fasirteen.
Hadaba Radio Daljir ayaa xiriir la sameeyey safaaradda Maraykanka ee magaalada Nairobi si bulshadu xog dhamaystiran uga hesho waxa ay yihiin xayiraadahaasi.
Matt goshko oo ah sarkaal katirsan qaybta arimaha somalida ee safaaradaasi ayaa Radio Daljir uga warbixiyey ?waxa ay Dawlada Maraykanku xayiraada ku kordhisey.
HALKAN KA DHEGAYSO WARAYSIGA MATT GOSHKO
Wuxuu sheegay in xayiraadahaasi ay yihiin kuwo saamaynaya dadka qaska kawada Soomaalida, kuwaasoo ay kamid yihiin Kooxda Al-shabaab iyo dhoofinta dhuxusha, sidoo kale wuxuu sheegay inay xayiraadani khusayso kuwa lunsaday lacagaha Soomaaliya iyo kuwa geysta faldenbiyeedyada dhanka Jinsiga ah.
Mar la weydiiyey aragtida Dawlada Maraykanka ee hub dhowaan ay dawlada Jabuuti ku wareejisey Soomaaliya ayu su’aashaasi ka gaabsaday inuu faah faahin ka bixiyo.
Hadalka Matt Goshko oo ka tirsan Safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa kusoo beegmaya xili mudooyinkii dambe siyaabo kala duwan loo turjumanayey xayiraado dhowaan uu Madaxweynaha Maraykanku ku kordhiyey wadanka Soomaaliya.